नेपाल टेलिकमको नाफा ५ अर्बभन्दा बढी, प्रतिसेयर आम्दानी कति ? - Arthasansar
नेपाल टेलिकमको नाफा ५ अर्बभन्दा बढी, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
विहीबार, ३० बैशाख २०७८, ०८ : ४८ मा प्रकाशित
नेपाल टेलिकमले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत आर्थी वर्षको सोहि अवधिमा कम्पनीको यो नाफा २२ प्रतिशतले थोरै हो । गत वर्षको सोहि अवधिसम्म कम्पनीले ७ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख १५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।
कम्पनीको आम्दानीमा गिरावट आएसँगै नाफा पनि घटेको हो । चैत मसान्तसम्म कम्पनीले ३१ अर्ब ६७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत वर्षको सोहि अवधिको कम्पनीले ३२ अर्ब २७ करोड २३ लाखभन्दा बढी कुल आम्दानी गरेको थियो ।
हाल चुक्तापूँजी १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ८२ अर्ब ९६ करोड ४९ लाख १४ हजार रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ५२ रुपैयाँ ३१ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ ६५३ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ ।